FOTODRAFITRASA : Voasakana nandritra ny adim-pamantaran-andro maro ny lalana Amborovy
Nametraka sakana tsy ahafahan’ireo fiarabe miditra amin’iny lalana vita rarivato eo amin’ny Toyota Rasseta Sunny hotel iny ireo mponina, ny alarobia teo. 16 août 2019
Tapaka nandritra ny adim-pamantaranandro maro ny lalam-pirenena faha 54 mankany amin’ny seranam-piaramanidina iny satria nibahana teo ireo fiarabe. Tsy afaka nandroso, tsy afaka niverina kosa ireo fiara hafa fa dia niandry izay sitrapon’ireo mpanao sakana sy ny fiarabe. Araka ny voalazan’ireo mpanao sakana moa dia tsy ankasitrahan’izy ireo ary toherin’izy ireo tanteraka ny fandalovan’ireo fiarabe amin’iny lalana vao vita rarivato iny. Natao ho an’ny vahoaka monina ety izy io, hoy izy ireo, ny nanaovan’ny CNaps an’io fa tsy natao ho an’ ireo fiarabe.
Manimba ny lalana ireo fiarabe mpitatitra fasika izay efa itarainan’ny mponina tato anatin’ny folo taona.Tsy manamboatra izy ireo fa manimba fotsiny, satria mandavaka ny lalana ny kodiaran’izy ireo. Misy amin’ireo tompona kariera mba mahatsapa tena manao lalana fa ny ankabeazany kosa dia tsy miraharaha. Tsy tafiditra anatin’ny bokin’andraikitra rahateo izany, ary ny marina dia samy mahazo tombontsoa amin’io daholo ny tompon’andraikitra ka minia mikimpy. Misy moa ny milaza manohitra imasom-bahoaka nefa mitavana ihany ao ambadika. Tsy dia olana ho an’ny vahoaka anefa raha toa ka misy ny fanamboaran’izy ireo lalana. Mifanilaka ireo tompon’ny kariera fasika sy ny mpitatitra ary ny fokontany satria samy miaro ny tombontsoany fa tsy miara-miasa kosa amin’ny fanatsarana io lalana io. Ireo fiarabe moa dia nitokona teo fa tsy nitady lalan-kafa na dia misy lalana hafa azon’izy ireo aleha aza eo ambonin’ny Fami resort teo aloha.
Tamin’ny 12 ora sy sasany vao afaka ny sakana ary tsy afaka mihitsy raha tsy nisy fidinana nataon’ireo zandary nanala ny sakana sy nandamina ny fifamoivoizana, ka niteraka fahasorenana tamin’ireo mpampiasa lalana izay tafahitsoka tao anatin’ny fitohanana nandritra ny adim-pamantaranandro maro. Nanambara kosa ny sefo fokontany fa manomboka izao dia afaka ny sakana ka tsy misy mahazo manao sakana fa samy mampiasa ny lalana avokoa na ny mponina eny na ny fiarabe mpitatitra fasika. Tsy manaiky izany kosa ireo mponina satria efa intelo, hoy izy ireo, no nasiam-panamboarana io lalana io hatramin’ny nahavitany noho ny vesatr’ireo fiarabe tsy zakany.
Manao antso avo amin’ny Lehiben’ny faritra sy ny Prefet hitady vahaolana izy ireo... Milaza samy manana taratasy izy ireo, na ny an-daniny ireo mponina milaza fa izy ireo no notoloran’ny Cnaps ny lalana na ny an-kilany mpitatitra fasika. Olana lehibe eo amin’ny fokontany Amborovy io fitrandrahana fasika io satria manimba ny tontolo iainana. Betsaka ihany koa ireo Kariera tsy nahazoana alalana ary ny tena olana dia tsy misy tombontsoan’ny fokontany mba azo amin’ny fitrandrahana atao ao, na dia misy aza ny tamerim-bidy tokony homena ny fokontany. Miandry ny tompon’andraikitra hijery akaiky ity olana ity ireo mponina mba tsy hanimba ny fotodrafitrasa efa misy nefa tsy hitondra vaovao